UkuSebenza ngokuSingathwa kweWindowsPress? Fudukela kuLawulo lokuSingathwa | Martech Zone
UkuSebenza ngokuSingathwa kweWindowsPress? Fudukela kuLawulo oluHlawulwayo
NgoLwesithathu, Meyi 6, 2020 NgoLwesibini, Oktobha 27, 2020 Douglas Karr
Nangona zikho iitoni zezizathu zokuba ufakelo lwakho lweWordPress luhamba kancinci (kubandakanya neeplagi ezingabhalwanga kakuhle kunye nemixholo), ndiyakholelwa esona sizathu sikhulu sokuba kutheni abantu beneengxaki yile yenkampani yabo yokubamba. Isidingo esongeziweyo samaqhosha entlalontle kunye nokudityaniswa kuhlanganisa umba-uninzi lwazo zilayisha kancinci kancinci.
Abantu bayaqaphela. Izaziso zabaphulaphuli bakho. Kwaye abaguquki. Ukuba nephepha elithatha ixesha elide kunemizuzwana emi-2 ukulilayisha kunokunyusa ngokubonakalayo inani leendwendwe ezishiya indawo yakho ... okanye okubi ... inqwelo yakho yokuthenga. Ngenxa yeso sizathu, kubalulekile ukuba usebenze ekuphuculeni isantya sakho.
KwiWordPress, sifudukele kwi Flywheel kwaye babe neziphumo ezintle. Indawo yethu ihlala inyuka ngama-99.9% okanye ngaphezulu (kwaye xa ingekho, sihlala sisebenza kuyo). Banazo zonke iziseko zophuhliso nezixhobo zolawulo ukwenza ulawulo lwendawo yakho-okanye zonke iisayithi zabaxumi bakho-kube lula kakhulu:
1-Cofa Ukubuyisela - Ukugcina kwangoko kwaye ubuyisele ngokugcina ngokulula i-Snapshot.
Iimpawu zeArhente -Ukwazi ukulawula abathengi ngaphakathi kweakhawunti yomthengi
Iiplueprints -Gcina umxholo wesiza kunye neeplagi njengolungelelwaniso lwesiko onokulusebenzisa ekwakheni iiprojekthi ezizayo.
Caching Itekhnoloji ye-Caching ye-scalability enkulu kunye nesantya.
CDN Ilungile -Ngokukhawuleza amaxesha omthwalo okhawulezayo womxholo we-tuli.
Umlo -Ukwazi ukwenza indawo ngokulula.
Izincedisi zemihla ngemihla - Iinkqubo ezizenzekelayo, ezingafunekiyo ukuxhasa usetyenziso lwakho olubalulekileyo.
Firewall - Multiple, firewalls enamandla phakathi kwedatha yakho nangaphandle izisongelo.
Ukukhangela iMalware -Ukufumanisa kwangaphambili kunye nokupheliswa kwe-malware eyingozi.
inkxaso Inkxaso yezobuchwephesha emnandi evela kwiingcali ze-WordPress eziseMelika.
I-SSL yamahhala -Vumela i-SSL kuzo zonke iisayithi zakho.
Ukucwangcisa -Ukwazi ukulingisa kunye nokusebenza ngaphakathi kwendawo yokuma, emva koko tyhala bukhoma.
Yintoni elawulwa yiWordPress?
Sihambile ngaphezulu kwabaxhasi abangama-50 ukuya Flywheel ngaphesheya kungekho ngaphantsi kwe-50 ufakelo lwe-WordPress, kwaye konke kuhambe ngokungagungqiyo. Kwaye Flywheel yi Umamkeli ocetyiswayo yiWordPress!
Owu, kwaye khange ndikhankanye ukuba iFlywheel inayo iplagi yakho yokufuduka?
Izizathu eziphambili zokufudukela ku Flywheel ziquka:
Inkxaso ye-WordPress -Andikwazi ukukuxelela onke amaxesha esasibaleka kuwo nemikhosi apho babebeka ngqo i-WordPress nge-caveat ukuba ayixhaswanga (nangona bahlala benonqakrazo olu-1). Imiba yemvume, imiba yogcino, imiba yezokhuseleko, imiba yokusebenza… uyayibiza ngegama, sabalekela kuyo kwaye wonke umsingathi watyhola iWindowsPress.
Inkxaso yeArhente -Luncedo olukhulu lokuba umthengi ungumnini weakhawunti kodwa songezwa njengabasebenzisi abagunyazisiweyo, abasebenzisi abagunyazisiweyo benkxaso, kunye nabasebenzisi abagunyazisiweyo be-FTP. Ukuba umxhasi usishiya, banokuhlala Flywheel kwaye baqhubeke nempumelelo yabo. Akusekho kubanjwa kwabathengi kubanjwa okanye babe nexesha elingahambi kakuhle lokufuduka.
Imirhumo yokuNxulumene Ngalo lonke ixesha sisayina umthengi ngeFlywheel, sisebenzisa Flywheel. Sivulekile kwaye sinyanisekile kubaxumi bethu ukuba senza iirandi ezimbalwa kuthethathethwano… kwaye kuba singabizi mali yokufuduka, abanangxaki kwaphela.
Umlo -Ukuba nakho ukwenza indawo ngaphandle komthungo kuyinto emnandi nje. Akusekho mfuneko yokuba sibambe indawo yokuma kwenye indawo kwaye emva koko siyigqithisele kumamkeli, Flywheel Bakhele ngaphakathi ngaphakathi. Siyakwazi ukubonisa umxhasi inkqubela phambili, mabangenise kwaye bayithathele uvavanyo lokuqhuba, kwaye bayityhale ngqo ngokucofa nje iqhosha.
kwideskithophu -Izenzekelayo okanye i-1-cofa i-backups kunye nokubuyiselwa kuye kwamnandi. Sasinomthengi owayevavanya ukudityaniswa komntu wesithathu kwaye ngalo lonke ixesha umntu wesithathu esithi bakulungele ukuphila, siza kuphila kwaye yasilela. Sikwazile ukubuyisela kwangoko indawo yangaphambili kwimicimbi yemizuzwana bade bafumana isisombululo kwiziseko zophuhliso.
ukwenza -I-caching solid caching kunye nenethiwekhi enkulu yokuhambisa umxholo igcine bonke abathengi bethu beqhuba kakuhle. Iindawo ezikhawulezayo ziphucula ukuguqulwa kweemetriki kunye nokukhangela kwinqanaba lokukhangela… yinto ebaluleke kakhulu ekungafuneki ukuba sikhathazeke ngayo.
Indawo efihliweyo yeWP - ukongeza kwi-cache ye-Flywheel, ikwaxhasa ngokupheleleyo Indawo efihliweyo yeWP kwaye i WP Rocket Faka iplagi. Le iplagi iyamangalisa- ngobunzima bokulayisha obunobunkunkqele, ulungelelwaniso, ukudityaniswa, ukugcinwa kwesiseko sedatha, kunye namandla okwenza i-cache ngaphambili. Yiplagin efanelekileyo yokutyala imali!
Ukhuseleko lweWindowsPress - ubuchule obunamandla bokuqhekeza bunokubeka esichengeni iinguqulelo ezindala zeWordPress okanye imixholo ebhalwe kakubi kunye neeplagi. Flywheel Ukujonga uguqulelo lwakho kunye nokuqinisekisa ukuba indawo yakho ayichaphazeleka njengoko sibona abanye abathengi babanye abantu beqhubeka nokuhlaselwa. Ukubhutyuza iinkuni, asikaze sibe nomcimbi. Kwaye siyayithanda loo nto Flywheel iya kuphucula iinguqulelo ukuba kukho umngcipheko wokhuseleko oqinisekisiweyo.
Ukucwangcisa - Flywheel inamandla okuma ngokuqinileyo anokuyenza nakweyiphi na indawo yakho, ikuncede ukuba ubenakho ukulingisa indawo yakho kwindawo eneqonga, uhlaziye indawo ehleliweyo, kwaye uyityhale kwakhona ukuze uphile xa sele ukulungele. Isixhobo esimangalisayo ekufuneka senziwe nakubani na okhangela ukwenza uhlaziyo olubalulekileyo kwindawo yabo-njengokuphucula umxholo omtsha.
Ukuba akwanelanga, Flywheel baphuhlise ezabo izicelo zokuhambisa ezabizwa ngokuba yi Local. Isicelo senza ukuba abaphuhlisi bakwazi:
Yenza indawo ekuyo ngokucofa kanye!
Yenza ukuhlela kwaye ubonise umxhasi wakho nge-URL yedemo
Shicilela kwi Flywheel ngokucofa kanye kuphela (kwaye iyasebenza)
Sibe noncedo lwe Flywheel iinjineli kwimiba eliqela esele ikhona. Sineziza eziye zaqhekezwa kwaye iqela labo lazisa iingcali zokhuseleko ukuba zichonge umba (ngesiqhelo iplagi) kwaye ziyilungise. Sineziza ezinemicimbi yokusebenza iqela labo (kunye nomdibaniso) osincedileyo ekusombululeni ingxaki kunye nokulungisa. Sineziza ezithathe imizuzwana eli-10 ukulayisha eminye imikhosi elayishe ngaphantsi kwemizuzwana emi-2 Flywheel.
Kwaye ayisiwo amabango ethu kuphela. Sabelane ngempumelelo yethu nezinye iiarhente, kwaye baye bafuduka bonke abaxhasi babo baya Flywheel. Inketho eyahlukileyo eneWordPress ivumela abathengi bakho ukuba bathenge isicwangciso kwaye badibanise iqela lakho njengabasebenzisi abagunyazisiweyo. Oku kukuvumela ukuba ucele inkxaso egameni labo kwaye ulawule umsebenzisi kunye nokufikelela kwe-SFTP-lonke elixa umthengi ephethe iakhawunti. Nika abathengi bakho ikhowudi yokuhambelana kunye Flywheel Ndiza uhlawule.
Ukuphuculwa kokusebenza okubangelwe kuncede ekunciphiseni amaxabiso okubuyisa, ukwandisa ixesha kwiphepha, kwaye- ngenxa yokuphucuka kwesantya sephepha- kusincede safumana ukubonakala kweinjini yokukhangela. Owu ... ewe, amakhonkco kule posi ngamakhonkco ethu amanyeneyo.
Abanye abaSebenzisi be-WordPress abaphetheyo
I-WordPress Managed Hosting ithandwa kakhulu yi-WordPress. Kukho eminye imikhosi emikhulu kwishishini elinye kwaye sizisebenzisile zonke:
WPEngine - ngoku ungumnikazi weFlywheel! I-WPEngine inezinto ezabelwana ngazo kodwa inezinto ezizodwa. Inye into esayifuna kumthengi yayikukukhuphela ngokuzenzekelayo iifayile zokungena ukuze zithobele.
Kinsta -Senza amaza amakhulu kolu shishino ngezixhobo zawo ezingakholelekiyo. Baqhuba ezinye iisayithi ezikhawulezayo ngokukhawuleza zeempawu ezinkulu kakhulu.
tags: enye indlela yokwenza i-wpengineukubamba okuhleiimpukaneI-flywheel yendawossl yasimahlaumthwalo owonqenayoUphuhliso lwamagama asekhayaukusingathwa kwe-WordPressWordPressi-wordpress i-backupsUkugcina i-WordpressI-wordpress cdnUkusetyenziswa kwegama ledathaUphuhliso lwegamaI-firewall yomliloyokupasa amagamaI-malware ye-wordpressIgama lefayile sslIsiteyitimenti segamaInkxaso yamagamawpcachewpenginewpengine ukubamba
Uzifumana njani iifonti ngeAdobe Capture
I-SERP yanamhlanje: UkuBonwa okuBonakalayo kwiibhokisi zikaGoogle, amakhadi, iziqwengana ezityebileyo kunye neepaneli
Aug 26, 2011 ngo-1:14 PM
Ndibajongile kodwa ingxaki yam ngokubanzi ngazo zonke ezi venkile ze-WordPress zibanjiweyo kukuba kufuneka uyeke into yolawulo engamkelekanga kum. Ukuqhuba iwebhusayithi enkulu kufuna ukuba ndibe nolawulo olupheleleyo kuwo wonke umba - kubandakanywa iiplagi kunye nokufikelela kwisiseko sedatha. Iiphakheji zabo zamaxabiso nazo azinangqiqo ngokwenyani - i-$ 100 / ngenyanga ye-250k yokujonga iphepha kunye ne-100gb? Yeyiphi imida engafanelekanga endinokuthi ndiyibethe kwiiveki ezi-2-3. Ngoku ndisebenzisa iMedia Temple (kwaye ndiyihlawula kakhulu) - kwaye ndisebenzisa zonke izixhobo 'zokuphucula' (i-cahcing, CDN, njl.njl Inqaku endizama ukulenza kukuba akukho bullet yesilivere xa kufikwa kwi-WordPress ukubaleka ngokukhawuleza. Ndizamile zonke.
Aug 26, 2011 ngo-5:25 PM
Unokulawula zonke iinkalo kunye nabo, uYonatan. Indawo yethu inetoni yokwenziwa ngokwezifiso kunye neeplagi zokuyenza ukuba yenze yonke into esiyifunayo. Ndiyakholelwa ukuba amaxabiso alungile kumndilili webhlog yeshishini… umntu ophakathi akayazi indlela yokuqwalasela ii-CDNs kunye ne-caching ngoko oku ngokuqinisekileyo kuphantsi kwelo xabiso. I-BTW: Sisebenzisa iMediatemple ngokunjalo… nge-CDN kunye ne-Cloudflare kwaye ayenzi kakuhle njengoko singathanda.
Sep 14, 2011 ngo-5:29 PM
Ngaba ubamba indawo ye-WordPress kwi-server yegridi yeMedia Temple okanye iseva yenyani ezinikeleyo? Ndinendawo elula ebanjwe kunye (mt) iminyaka eyi-2 kwigridi kunye namaxesha okulayisha ayemanyumnyezi nje, ngokucotha ngokuhlekisayo kwaye indawo yolawulo yayiyintlungu ebuhlungu kwi-arse. Ngaba ndikhankanye onke amava ayemanyumnyezi ngokupheleleyo?
Ndenze konke okusemandleni phantsi kwelanga ukukhulisa indawo yam ngaphandle kokuthenga isitya segridi kwaye akukho nto isebenzayo. Ilungiselelwe nge-minify, iWP Super Cache, njl. Imizuzwana engama-20 ukulayisha iphepha lasekhaya?
Ndaye ndagqiba ekubeni ndihambise indawo yam kwi-Hostgator kwaye ukunyuka kwesantya kuphindwe kathathu ngobusuku. Ndisalikhumbula (mt) iphaneli yolawulo engakholelekiyo kodwa isantya sendawo yam siphakamisa ujongano oluhle.
Ngoku ndithengela i-web host entsha kwakhona kodwa ngeli xesha kuya kufuneka ndifake i-multisite ngokukwazi ukusingatha iisayithi ze-10 ezincinci ngaphakathi kwayo. Ndiye ndajonga (mt) i-virtual ezinikeleyo, iWP Engine kunye nePage.ly. ITempile yeMedia ibonakala ngathi yinto engcono kakhulu kwaye ndandisele nditshiswe ngabo kwigridi, kodwa ndiyazibuza ukuba i-virtual yabo ezinikeleyo iya kundinika ukunyusa isantya endikufunayo kunye nokulula kokusetyenziswa okuza kunye neepaneli zabo zokulawula.
Sep 14, 2011 ngo-7:09 PM
I-MT kuphela "i-deal" ukuba ufuna umatshini ngaphandle kwenkxaso ethile ye-WordPress. Ukuba ufuna ukwenza ukhuseleko ngokwakho, zikhawulezise ngokwakho, scalability ngokwakho, CDN ngokwakho (kwaye uyihlawule).
Kwaye ke kukho ukufumaneka okuphezulu. Zombini ngenxa yesoftware kunye nemiba yehardware, ufakelo lweseva enye alunakufumaneka kakhulu njengeqela.
Ngokombono wethu, ukuzama ukugcina i-$ 20 / mo kodwa kufuneka wenze zonke ezo zinto ngokwakho ayisebenzisi kakuhle ixesha okanye imali. Kulula kuthi kuba sihlawula ixabiso layo yonke loo nto phezu kwabo bonke abathengi bethu; kuninzi kakhulu ukuba nengqiqo kwisiza esinye ukuba sikwenze ukuba awunguye iTechCrunch.
Sep 14, 2011 ngo-7:38 PM
Enkosi Jason. Ndinidubula ngolwazi oluthile ngesayithi yakho ukuze ndifumane isicatshulwa.
Aug 26, 2011 ngo-6:17 PM
Molo Joanathan, ndiyaqonda ukuba uvela phi, kodwa awukayizami yonke loo nto ukuba awukhange usizame. 🙂
Loo mida sisikhokelo-asiyicimi indawo yakho okanye nantoni na ukuba uyibethile, oko kuthetha ukuba kusibiza kakhulu kwaye kuya kukubiza ngakumbi. Singakwazi ukuthetha ngayo.
Besinabo abantu abaninzi abangakwaziyo ukufikelela kwinqanaba elithile, kodwa emva koko babone ukuphucuka kunye nathi. Ngenxa yokuba: http://wpengine.com/our-infrastructure .
Kwakhona, *sikwenza* kukunika ulawulo kwiiplagi ezifakiweyo, ikhowudi yesiko, kunye nofikelelo lwesiseko sedatha, ngoko sukucinga ukuba siya kukuvalela ngaphandle!
Endaweni yoko, kutheni ungasiniki ithuba… hambisa ikopi yebhlog yakho, emva koko undithumelele i-imeyile (jason at wpengine) kwaye masibone ukuba singenza ntoni.
Oktobha 9, 2011 ngo-11: 42 PM
9-10 imizuzwana ayamkelekanga. Ngokwam ndifumene ukutshintshela kwi-Thesis ukuya kwisakhelo se-Woo yenze indawo yam yacotha kakhulu. Bendilayisha nge 3 seconds ngoku indlela yayo icotha.
Ndifumene i-VPS ingcono kakhulu kunokusingathwa okwabelwanayo kwaye ndahambisa iindawo ezininzi kwi-MT eyi-gimmick kunye nokuphazamiseka ngokombono wam kunye nexabiso eliphezulu kakhulu.
Unokufumana i-VPS nge-cPanel ye-usd $ 35 ngenyanga kwaye iyabiza kwiiphakheji zonyaka. Ixabiso eliphantsi kwakhona kwiVPS kunye nePlesk
Oktobha 1, 2012 ngo-1: 52 PM
Molo Brad... Ukuba awukhathali ukuba ndibuze .. uyifumene phi i-“VPS ene-cPanel ye-usd$35 ngenyanga”
Ngaba oko kuseMT? Uthi uhambise iindawo ezininzi apho kodwa yintoni i-gimmick yazo? Ngaba wonwabile ngabo?
Ndibhidekile ziicomments zenu.
Agasti 26, 2011 kwi-11: 08 AM
Ongaziwayo, ndicinga ukuba uyakufumana aba bantu bahluke kakhulu. Okokuqala, unofikelelo lweSFTP ukuze wenze utshintsho olufunayo kwicala leplagin. Ekubeni unofikelelo olupheleleyo lwefayile, unokwenza nantoni na ongathanda ngayo kwisiseko sedatha. Nam, ndikwiMediaTemple kwaye ndisebenzisa icaching kunye neCDN… kodwa mna nawe siluhlobo olunqabileyo. Ukuba umntu akayiqondi indlela yokwandisa isantya sephepha, i-WP Engine sisisombululo esigqibeleleyo ekubeni banexhala malunga nokusebenza ngoko awufuni. Umthamo wokujongwa kwekhasi kunye ne-bandwidth igqithise kakhulu into efunwa yi-blogger yenkampani. Ukuba ubunokuqesha ingcali ukuba yandise indawo yakho kwaye uqwalasele i-CDN, kuya kuba neendleko ezininzi, nangaphezulu.
Aug 26, 2011 ngo-5:01 PM
Inkosi elungileyo iwebhusayithi yakho ilayisha ngokukhawuleza.
Aug 26, 2011 ngo-5:14 PM
Hayi okwangoku - kodwa kuya kwenzeka!
Aug 26, 2011 ngo-5:16 PM
Ngokwenene? Bendicinga ukuba sowufudukile. Ukuba akunjalo, wenza kakuhle kakhulu ngesantya njengoko sinjalo.
Aug 26, 2011 ngo-5:22 PM
Ndiqale ukusebenzisa i-Cloudflare-yijonge, yinkonzo yasimahla kwaye ithathe umthwalo omkhulu kwiiseva zethu zokubamba kwiMediatemple. Ayisiyiyo eyona ikhawulezayo, kodwa isantya ngokubanzi siyaphucuka ngenxa yayo.
Aug 26, 2011 ngo-5:50 PM
Kuhle. Kuya kufuneka ndizijonge. Okumangalisayo kukuba, into endiyithandayo ye-WPEngine xa ndiyijongile yayingeyona isantya okanye ukuhanjiswa. Ibiyinkqubo yokucofa oku-1. Imnandi kangakanani loo nto?
Aug 28, 2011 ngo-1:40 PM
Ndiyakrokrela ukuba nantoni na ebandakanya uJason Cohen iya kuba yigolide eqinileyo. Andizange ndibenesidingo seCodeCollaborator yakhe, ukuba liqela lomntu omnye, LOL. Kodwa, bendimlandela kwaye ndifunda ifilosofi yakhe iminyaka engaphezu kwemibini.
Xa eqala ukubhala nge-WP Engine, ndandinomdla. Ewe, uyayiphinda kwakhona amaxesha ngamaxesha kwaye yindlela endingene ngayo namhlanje.
Okumangalisayo kukuba, mhlawumbi andikakulungeli i-WP Engine, okwangoku, ngoko ke ndiza kukhangela kwi-CloudFlare.
Sep 14, 2011 ngo-5:33 PM
Njengokulandela le ncoko-ndiye ndagqiba ukutshintshela ukusingathwa kwe-Anglotopia.net ukuya kwi-Wpengine kwaye indawo yam iqhuba ngokukhawuleza okukhulu. Ndigcina iseva ye-MT kwezinye iisayithi apho ixesha lokulayisha lingengomcimbi kodwa okwangoku i-Anglotopia kulapho kufuneka ibe khona.
Jun 26, 2012 ngo-4:45 AM
Ibiza kakhulu kwisiza esinye. Ndiza kuya kwiVPS engalawulwayo endaweni yoko. Ndiza kuba nemimandla engenamkhawulo kunye neenkqubo ze-caching ezifana ne-xcache.